Kedu ụzọ iji nweta backlinks na 2019?
Ntuziaka njikọ ga-abụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu iji nweta njikọta mmiri na ngalaba ma melite ebe nrụọrụ weebụ. Site n'enyemaka nke arịrịọ njikọ, ị nwere ike ịmepụta njikọ ndị ọzọ site na iji ọdịnaya dị ugbu a na saịtị gị. Backlinking bụ ụzọ dị mma isi wuo ika gị ma mee ka mmata ya mara. Nanị nsogbu bụ na ọtụtụ ndị nwere ebe nrụọrụ weebụ nwere usoro na-ezighị ezi iji jikọta ụlọ. Ha echefu itinye weebụsaịtị ndị ọzọ na-abụghị nke ha, na-ahazi ha na ihe mere nke a ga-eji baara onye nwe ụlọ ọrụ ahụ uru.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụzọ ụfọdụ esi esi jiri njikọ njikọ iji melite mgbasa ozi ụlọ njikọ gị. Enwere ọtụtụ ụdị arịrịọ dị iche iche nke backlinks ma e wezụga ndị ị ga-ahụ n'isiokwu a.
Olee otú iji nweta backlinks na 2019?
Ị nwere oge kachasị mkpa ị ga - atụle bụ mgbe ị ga - agafe na weebụsaịtị; ịkwesịrị ịhazi ozi email ahụ ka o wee dị mkpa na saịtị ahụ. Jide n'aka na ozi ịntanetị gị pụrụ iche na ịgụnye ozi nke onye na-agụ ya ga-enwe nnukwu ekele. Ịkwesịrị ịkọwapụta ya na isiokwu ebe nrụọrụ weebụ ma gosipụta onye ọrụ azụmahịa gị na ị na-etinye aka na ọdịnaya dị na isi iyi weebụ ya. Ọtụtụ minit ole na ole ọ na-ewe nwere ike ime nnukwu mgbanwe na nzaghachi na weebụsaịtị ndị nwere ike inye gị nzaghachi dị mma maka arịrịọ gị. Ịkwesiri iburu ozi a n'uche mgbe obula ị gbalịrị ịmekọrịta mmekọrịta na onye nwe ụlọ ọrụ.
Rịọ ndekọ ndekọ njikọ
Ụzọ kachasị mfe iji wuo njikọ gị na ngalaba gị bụ site na ịrịọ arịrịọ.Otú ọ dị, usoro a adịghịkwa irè karịa ndị ọzọ. Ọ na-ewe nanị minit ole na ole iji kpọtụrụ onye na webmaster ma rịọ maka backlink. Ihe si na omume dị otú a pụta nwere ike ịdị iche na isi iyi nke ịchọrọ ịkwado. Ebe nrụọrụ weebụ a maara nke ọma nwere ike agaghị anabata nkwenye gị ka ha nwere nhọrọ siri ike nke ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya na ibe ha.
Na-achọ nsogbu na nsogbu weebụ ugbu a
Ụzọ ọzọ ọzọ nwere ọgụgụ isi iji nweta akara azụ azụ na saịtị gị bụ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ ma kwupụta njehie ndị nwere ike ime ihe ngwọta nye ha. Ozi a nwere ike iwetara onye nwe ụlọ ọrụ uru dịka ị na-enyere aka dozie nsogbu ndị ha nwere ike ịmaghị. Ọ bụrụ na ị na-eji ụdị njikọ a, jide n'aka na ị na-enye onye nna weebụ ọrụ data a n'efu. Ọ dị mma ichere ruo mgbe ị na-eme nkwenye ozi abụọ ma ọ bụ nke atọ tupu ị mee arịrịọ backlink.
Iji ọdịnaya gị dị ka isi iyi maka ọdịnaya ịchọrọ
Ụzọ a nke inweta backlinks nwere ike ịba uru maka saịtị gị. Ọ bụrụ na ị na-ezo aka onye nchịkọta blog ma kwuo banyere isiokwu ma ọ bụ post ịchọrọ ka azụlink si, ọ bụ ezigbo isiokwu mkparịta ụka. Ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta backlinks bụ ịkpọtụrụ post ịchọtara ha, wee bulie post ahụ ịchọrọ njikọ site. Ịkwesiri ịgụ isiokwu ma hụ ebe ị na-ede aha gị ga-abụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụrụ na ọ nweghị njikọ ugbu a, chee na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịbụ isi iyi maka njikọ a Source .